Iholide yokurenta iHalcoya/Ingqongwe ngamaplanga
Shizukuishi, Iwate District, Iwate, Japan
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe ongu木を愉しむ民泊 Halcoya
Indawo yokuqeshisa ngeholide iHalcoya ikufuphi neLake Gosho kwaye ijonge kwiNtaba ye-Iwate. Esi sakhiwo sakhiwe kusetyenziswa iintlobo ezili-10 zeenkuni kwiDolophu yaseHaworthia ukuze ube namava obushushu bomthi.
Ukuba ufuna ukuphumla kwindalo okanye ukonwabela ixesha kunye nosapho kunye nabahlobo bakho kwindawo eyahlukileyo kunesiqhelo, nceda uze kusindwendwela.
Idolophu yaseShizukuishi kwiSithili sase-Iwate yindawo yabakhenkethi apho unokonwabela ifama yaseKoiwai, iLake Gosho, iindawo zokuchithela i-ski kunye nemithombo eshushu.
・ Rhoqo bulala iintsholongwane kwiindawo eziqhelekileyo.
・ Nika impepho eyaneleyo kwigumbi leendwendwe.
・ Iingcali zokucoca ziya kunxiba iimaski kunye neiglavu kwaye zisebenzise iindlela ezisebenzayo ezinje ngotywala ukucoca igumbi (kubandakanya izinto ezilawulayo, izitshixo eludongeni, iingqongqo zeengcango, njl. njl.).
・ Inani lamagumbi okulala 3
・ Inani leebhedi 7
・ Inani lamagumbi okuhlambela igumbi eli-1
・ Izindlu zangasese ezintathu
[IiNkonzo / Izixhobo]
・ Ibhafu (ibhafu) / idesika (itafile) / isitulo (sofa) / iTV / ifriji / umatshini wokuhlamba / isomisi / uluhlu lwe-oveni ye-elektroniki / isicoci se-vacuum / i-rice cooker / isomisi / ibhedi / ifuton / itafile / izixhobo zokupheka
Isitovu segesi / i-oven microwave / itoaster / i-rice cooker / i-IH isitya seseti (imbiza ingasetyenziswa etafileni ebusika) / ifriji yomthengi / izitya, izitya, iiglasi, izinti, njl njl. isosi) Iyafumaneka kubathengi)
・ Izilwanyana zasekhaya ezivumelekileyo / ezifakwe ngaphakathi endlini zidisinfected / kungena umoya wangaphakathi ngaphakathi / Usapho / Abantwana /
Indawo yokupaka yasimahla / indawo yokugcina imithwalo ekhoyo.
Kukho itafile eqhotsiweyo yeBBQ, iikhilogram ezi-2 zamalahle amhlophe, isitshisi somlilo, kunye neentambo.
¥ 1,500 Nceda uhlawule ekuhlaleni.
[Intlawulo yenja yeqabane]
Ukuba uhlala nenja yakho, qiniseka ukusebenzisa olu khetho ¥ 1,000
¥ 500 eyesibini nezinja ezilandelayo
Itawuli yobuso / amashiti / ibhafu / isepha / isepha yesandla / isicoci sesandla / isepha yomzimba / ishampoo / iRinse / iconditioner /
Isicoci sokuhlamba impahla / ibhrashi yamazinyo / iipjama / izixhoma.
Ifama yaseKoiwai kunye neLake Gosho
・ Iindawo ekuchithelwa kuzo i-ski kunye nemithombo eshushu
Umbuki zindwendwe ngu- 木を愉しむ民泊 Halcoya
岩手県にある雫石町は小岩井農場や御所湖、スキー場や温泉などを楽しめる観光地です。民泊halcoyaは御所湖が近く、岩手山を眺められる場所にあります。 ​　木のぬくもりのある暮らしを体感してもらいたいと雫石町内の10種類の木を使用し建てた施設です。プライベート空間を満喫できる１棟貸切りのご利用も承っております。 自然の中でゆっくりしたい、家族や友だちとの時間をいつもと違う空間で楽しみたいなど‥そんな時にどうぞいらしてください。
Inombolo yomthetho: M030024498